"Kaliya Marka Ay Qashinka Tuurayo Ayaan Dibedda Usoo Baxaa" - Xiddig Ka Tirsan Barcelona Oo Ka Hadlay Werwerka Ay Ku Nool Yihiin - Gool24.Net
“Kaliya Marka Ay Qashinka Tuurayo Ayaan Dibedda Usoo Baxaa” – Xiddig Ka Tirsan Barcelona Oo Ka Hadlay Werwerka Ay Ku Nool Yihiin
Si loo xakameeyo faafidda xanuunka Coronavirus, dawladda Spain ayaa muwaadiniinteeda iyo dadka kale ee dalkaas ku nool kusoo rogtay xayiraado adag oo dhinaca dhaqdhaqaaqa ah, taas oo ay tahay inay u hoggaansamaan si ay uga fogaadaan caabuqa Coronavirus.
Ciyaartoyda kala duwan ee dalkaas ku sugan ayaa ku qasban inay awaamiirtan fuliyaan, waxaana taas caddeeyey xiddig ka tirsan Barcelona oo sheegay in kaliya hal mar uu dibedda usoo baxo, isla markaana uu inta kale oo dhan gurigiisa hoosta kaga jiro.
Ivan Rakitic oo u warramay barta Rasmiga ah ee Barcelona, ayaa waxa uu sheegay in goobta qashinka uu ku tuuro ay u jirto ilaa 50 tallaabo, kaliyana uu bannaanka aado marka uu rabo inuu goobtaas kusoo ridiyo wixii qashin ah.
“Kaliya hal mar ayaan bannaanka aadaa si aan qashinka usoo tuuro, waxaanay ii jirtaa illaa 50 mitir, waana waxa kaliya ee aan dariiga ugu baxo” Ayuu yidhi Rakitic.
Waxa uu laacibka reer Croatia tibaaxay in waddannka Talyaaniga ay dhaqdhaqaaq la’aanta noocan ah kala soo kulmeen ciyaartii ay lasoo dheeleen Napoli, waxaanu yidhi: “Waxaan si fiican u xasuustaa ciyaartii aanu u tagnay Napoli ee aanu la soo ciyaarnay Champions League oo ay arrintani mar horeba ka bilaabantay Talyaaniga. Dhakhtarka ayaan u sheegay in aanan kalsooni ku qabin (xanuunka coronavirus ee Talyaaniga ka dillaacay xilligaas), oo ay xaaladduna kasii dari karayso.
“Hadda dhamaan waynu midaysanahay, dabcanna waxaan jeclaan lahaa inaan dariiqyada ku ciyaarno kubadda ama aan lugayno, laakiin waa inaan fahamno inaynu u baahanahay inaynu samayno tan.”
Rakitic waxa kale oo uu ka hadlay sida uu carruurtiisa uga caawiyo inay waxbarashadooda ku qaataan qaab Online ah iyo sida ay u adag tahay inay xaalad karantiil ah galaan, waxaanu yhidhi” “Kuwayaga carruurta haysta waanu ognahay sida ay noogu adag tahay. Waxaanu kacnaa inta u dhaxaysa 7:30 illaa 8:00, waanu qureecannaa, kaddibna waxaanu hubinaa shaqooyinka Online-ka loogu soo diray carruurta iskuulka. xoogaa ayaanu la ciyarnaa, cuntada ayaanu diyaarinaa, kaddib waxaanu hubinaa haddii ay u baahan yihiin hurdo – mar walba waanu qoslaynaa inta badan maalintii. Waxaanu rabnaa inaanu si wada jir ah uga faa’iidaysano waqtiyaga. Subaxdii waxaanu nahay macallimiin, gellinka dambena waanu ciyaarnaa.”
Ugu dambayn, kubbad-sameeyahani waxa uu tilmaamay inuu sameeyo jimicsiyo kala duwan isagoo raacaya tilmaamaha tababareyaasha jidh-dhiska Barcelona.